Bagan - Myanmar Keyboard 14.8 Download APK para Android | Aptoide
Whats new in version 14.8
✓ Animated Theme on Keyboard Available✓ Bug fixed and Performance enhance.
ကီးဘုတ် မြန်မာ ကီးဘုတ် (ပုဂံ ကီးဘုတ်)
မြန်မာ ကီးဘုတ် သည် မြန်မာ Desenvolvedor များ ရေးသားထားသော အကောင်းဆုံး မြန်မာ ကီးဘုတ် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာစာ ရိုက် ရာတွင် ဇော်ဂျီ ယူနီကုတ် နှစ်မျိုး လုံး ကို အဆင်ပြေ ရိုက် နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားသော မြန်မာ ကီးဘုတ် ဖြစ်ပါသည်။ ဇော်ဂျီ ဖော င့်ဖြင့် ရာတွင် လည်းကောင်း၊ ယူနီကုတ် ဖော င့်ဖြင့် ရာတွင် လည်းကောင်း လွယ်ကူ လျှင် ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ် ထားခြင်း ကြောင့် မြန်မာ ကီးဘုတ် များတွင် ထိပ်တန်း ဖြစ်သော၊ အသုံးပြုသူများ ပြား စွာ ရှိသော မြန်မာ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အခမဲ့ ပြုလုပ် ရာတွင် အမြန်ဆုံး နှင့် မှန်ကန် ဆုံး ရိုက် နှိပ် ပုဂံ ပုဂံ အခမဲ့ အခမဲ့ Instalar ပြုလုပ် အသုံးပြု လိုက်ပါ။ မြန်မာ ဇော်ဂျီ၊ မြန်မာ ယူနီကုတ် ကီးဘုတ် သာမက ရှမ်း၊ မွန် နှင့် ထိုင်း ကီးဘုတ် များကို ပုဂံ ကီးဘုတ် တွင် အသုံးပြုနိုင် ပါပြီ.
ကျနော်တို့ Bagan Keyboard Version အသစ်မှာ ပါ တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် လေးတွေကို ရှင်းပြ ချင်ပါတယ်။ ရအောင် ဖတ် ကြည့် ရအောင်!
- ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ ယူနီကုဒ် င့်Auto စစ် ပေးပြီး တစ်ခါတည်း Teclado Unicode ပြောင်းလဲ ပေးတဲ့ Detecção automática de fonteeseleção de teclado
- လက်ကွက် လက်ကွက် Layout လို့ရတယ် မျိုး Unic လို့ရတယ် (Estilo Bagan, သင်ပုန်းကြီး Estilo, Estilo Unicode) နဲ့ Layout ရိုက် ရိုက် ထွက်တဲ့ စာ က Ordem Unicode နဲ့ ထွက်တယ်
- Estilo Bagan က က ရှေ့ ရရစ် ရှေ့ ရိုက်တဲ့ ပုံစံ၊ သင်ပုန်းကြီး က သဝေထိုး ရှေ့ ရရစ် ရိုက်တဲ့ ပုံစံ၊ Estilo Unicode က သဝေထိုး နောက် ရရစ် နောက် ရိုက်တဲ့ ပုံစံ
- ကိုယ့်ဖုန်းထဲက သီချင်း၊ ဗီဒီယို၊ Entrar em contato com တွေကို ဇော်ဂျီနဲ့ မှတ် ထားတယ်၊ Anterior Próximo Configuração do teclado Bagan, conversor Unicode, backup (backupebackup) (backup, backup)
- SMS တွေ ဖတ်လို့ မ ရ ဖူး လား၊ Copiar Copiar Converter Convertaacaixa de diálogo Converter
- Digitação por voz လုပ်ချင်တာ လား၊ Bagan Keyboard မှာ Digitação por voz do Google ရော Digitação por voz Bagan (နည်းပညာ ထုတ် နည်းပညာ) နှစ်ခု လုံး။ ဒါ့အပြင် ငွေလဲနှုန်း တွေ ရွှေဈေး၊ လို့ရတဲ့ ဈေး တွေကို အသံ နဲ့ Command Comando de voz Bagan။ Release Versão Parcial အပြင် အပြင် Beta မို့ ထုတ် တာ မို့ Usuário အကုန် မရသေးပါ ဖူး နောက်ပိုင်း အကုန် ရမှာပါ။ ဖြည်းဖြည်းချင်း လူတွေက အရမ်း များတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်း Release လုပ်နေတာပါ။
- ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ ယူနီကုဒ် ဖော်သာ မှန်၊ ကျန်တာ ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုဖူး အကုန် Keyboard Bagan Keyboard တစ်ခုနဲ့ တင် အကုန် အဆင်ပြေ။
ကဲ ယူနီကုဒ် အတွက်ရော ဇော်ဂျီ အတွက် ပူ စရာ မလိုပဲ အလွယ်တကူ ရတဲ့ ပုဂံ ကီးဘုတ် ရှိနေမှ တော့ ဘာ များ လိုသေး လဲ။ ကီးဘုတ် လူသုံး အများဆုံး ပုဂံ ကီးဘုတ်!
# Digitar é mais fácil do que nunca - Melhor teclado de Mianmar #
O Bagan Keyboard é um teclado de Mianmar que enfatizaetrabalha duro no sistema de digitação de idiomas de Mianmar. Ele também forneceasolução perfeita do Android Myanmar Keyboard para quem se comunica via mensagens instantâneas, com um recurso mais fácil, rápidoeinteligente. Também é indicado pela Telenor Myanmar como o melhor aplicativo para Android para o ano de 2014, evento Digital Winners.
Muitos usuários do teclado de Mianmar agora estão usando o Bagan Keyboard como seu aplicativo de digitação padrão.
Completa você com sugestões. Isso economiza seu tempo com frases de atalho predefinidas. Ele escuta todas as suas ações de digitaçãoefornece instantaneamente suas frases preferidas.
A equipe de desenvolvimento está sempre cuidando de todos os comentáriosereivindicações do usuário, para fornecer uma melhor experiência de digitação de mensagens instantâneas, além de oferecer saboresaseu desejo, tanto o Unicode Zawgyi quanto o Myanmar. O Teclado Bagan pode ser considerado o melhor teclado Unicode de Mianmar no mercado. Apoiamos os layouts de teclado UnicodeeZawgyi de Mianmar.
O Teclado Bagan também é conhecido como Teclado Birmanês, Teclado Zawgyi, Teclado Unicode de Mianmar. O Bagan Keyboard é compatível comafonte Zawgyi,afonte Unicode de Mianmar,afonte Unicode,afonte de Mianmarea fonte birmanesa. O usuário pode digitar Myanmar Unicode ou Zawgyi usando o Bagan Keyboardehá uma configuração no teclado para alterar conformeapreferência do usuário.
O Bagan Keyboard também suporta layouts de teclado Shan, MoneThai.
Aplicações semelhantesaBagan - Myanmar Keyboard
Bagan - Myanmar Keyboard - Informação APK